Abtidoon oo Amarka Eebahay la Afuufay! – Rasaasa News
Sep 30, 2009 Jwxo-shiil
Ma aragtay Abtidoon oo la afuufay oo ayna indhahaagu eegi karin korkiisa. Waligaa ha khayaamin ruux ku aaminay, inta aad nooshahay, xitaa hadii ruuxaasi cadowgaa yahay, waa odhaah dhab oo ku salaysan dhinac niyada [moral status], waana arin ay ka digaan dadku diin kasta oo ay haystaan.
Dhaqanka suuban ee Somaliyeed, gaar ahaana ka Somalida Ogadeeniya waxaa uu aad u qadariyaa balanta [aamin], balantu waa waxa kaliya ee ay dadku isku aaminaan, iyada oo ayna jirin wax heshii ah ama qoraal ah oo la saxiixay. Waxaad dadka ka maqli marka aad joogto Ogadeeniya, “ma kaa balan baa arintaasi iyo haa waa iga balan”, wax kale oo la samayn ma jirto labadaas ruux ama dadkaasi wixii ay ku balameen waa in uu sidii loo balamay u fulaa. Waxay dadweynuhu ku xoojiyaan balanta odhaahyo leh qaafiyad oo xoojinaya in ay dadku balanta oofiyaan sida, “balan laawe waa diin la,aawe, balan qabe ma badhaadho, balan Alle ku qabay” erayadaas iyo kuwo kale oo aad u badan ayaa loo daliishadaa kuwa balanta ka baxa.
Amarka Eebe weyne dadka aan balanta oofin, waxay la kulmaan dhibaato aan ka soo waaqsi lahayn oo uga timaada dhinaca Eebe, waxaa kale oo ay bulshada ay ku dhex nool yihiin kala kulmaan sumcad xumo iyo iyaga oo aan wax qiimo ah ka helin dadka.
Dadka gala balan ka baxa, kolka ay ogaadaan in ay galeen balan oofin la,aan, dadkuna ay ogaadaan ayaa waxaa soo foodsaara, dhibaato xaga niyada ah [depression] waxayna had iyo goorba qoomameeyaan falka xun ee ay sameeyaan, waxayna moodaan in dadku iyaga hadal hayaan oo la sheegayo dunuubtooda. Arintaas ayaa waxay u keentaa in ay ku noolaadaan niyad xumo, u keenta xanuun aan bogsad lahayn oo ugu dambaynta dila.
Arimahaas bal ka baxa ah waxaa sameeyey qaar ka mid ahaan jiray ururka ONLF, waxaana oogadooda lagu arkay calaamadihii lagu aqoon jiray dadka gala dunuubta qarsoon ee balan qabnimada. Xubnaha ay calaamaduhu ka muuqdaan ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maadeey [Abtitoodn], Abtidoon amamrka Eebe waa la afuufay waxaana jidhkiisa oo dhan buuxiyey biyo, miisaankiisa ayaa waxaa uu ahaan jiray 85kg, xiligan waxaa uu marayaa 210kg. Waxaa bararay xubin kasta oo jidhkiisa ah, bararku waa xubnaha gudaha ah, balse waxaa uu ka muuqdaa jidhkiisa kore, waxaa aad u adag in uu hadalka ku deeqsiiyo marka uu hadlaayo xabeeb darteed. Indhaha ayaa qarsoomay, cidiyaha gacmaha iyo lugaha ayaa iyaguna qarsoomay barar awgii.
Abtidoon waxaa si qarsoodi ah loo dhigay Isbitaal ku yaal New York halkaas oo ay degan yihiin Abtiyaashiis, oo uu kula dhuuntay xanuunka haya, oo uusan u sheegan karin dadka Somalida Ogadeeniya, hadii uu u sheegan lahaana wuxuu garan waxa ay odhan oo ah waa balantii jabiyey iyo khayaano dad aan ka warhaynin. Abtidoon waxaa uu isaga dhigaa dadka Somalida Ogadeeniya in uu caafimaad qabo oo uu fuulay hilib xad dhaaf ah, laakiin runtu waa sida aan kor ku soo sheegnay.
Jwxo-shiil ayaa isagana xaalkiisa laga dayrinayaa, in kasta oo uu ka soo baxay Isbitaal uu ku jiray afar todobaad, ayaa eegana uusan karin socod sidaas ah. Waxaana la sheegayaa in laga soo fasaxay Isbitaalka, lana filayo in uu dhakhso ugu noqondoon Isbitaalka, Jwxo-shiil oo aan isku daynay in aan sawirno ayey reerkiisu noo diideen in aan sawir ka qaadno, waxaa uu ku tukubayaa bakoorad uusan la,aanteed socon karin. Eebahay waa uu ka soo samato bixiyey dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo aan caymiyeen hadii ay heli lahaayeen, Eebahay ayaa ogg waxa uu xaalkiisu noqon laakiin Jwxo-shiil, waxaa uu u muuqday nin sariir ku dhimandoona.
Maxamed Macalin [Seedi], oo ahaa hogaankii Jaaliyaadka ee Jwxo-shiil ayaa muddo dhawr bilood ahba ku jira Isbitaal ku yaal dalka Canada halkaas oo laga dawaynayo cudurka dhiig kar, waxaanan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo uu samayn karo tan iyo intii uu helay xanuunkani.
Caalamadaha ka muuqda dadkan ayaa waxaa loo aanaynayaa in ay yihiin, balan khayaano ah oo ay ka galeen ummada iyo waliba shakhsiyaad ay is dhaarsadeen oo ay kuwada jireen Jwxo. Waxaana ay abaabuleen sidii loo burburin lahaa halgankii ay dadku ku aamineen, waxaana haysata xanuuno ay u horseeday bal ka baxayo ay u galeen si guud iyo si gaarba.
Arimaha Bulshada iyo caafimaadka
Garasho La,aanta boggaga Internetka iyo Burburka ONLF